Raiso ny mari-pahaizana licence anio »University of Hodges - Fandraisana
Sokajy: Ny mari-pahaizana diplaoma, Ny zava-misy fotsiny
Safidio ny programa mari-pahaizana licence
Torolàlana momba ny fahaizan'ny kolejy: Kolejy an-tserasera an-tserasera 2020 ao Florida
Torolàlana ho an'ny sekoly an-tserasera: 2020 Colleges an-tserasera tsara indrindra any Florida
Taratasy fanamarinana mari-pahaizana momba ny cyber
Ny mari-pankasitrahana Cybersecurity dia taratasy fanamarinana ora 18 izay mety ho vita ao anatin'ny semesera roa. Mampifangaro lohahevitra momba ny rafitra fampahalalana marobe toy ny Fitantanana stratejika ny rafitra IT sy ny fironana IT miaraka amina lohahevitra momba ny fiarovana amin'ny cyber toy izany Fanarahan-dalàna, fiarovana azo antoka amin'ny IT, ary forensika mandroso. Ity taratasy fanamarinana ity dia natao ho an'ireo izay maniry manokana momba ny fiarovana an-tserasera mandroso amin'ny asany. Ho fanampin'izany, ity taratasy fanamarinana ity dia mety hanomana ireo izay te hampianatra ny fiarovana ny cyber amin'ny ambaratonga ambony. Misy fepetra takiana mialoha ho an'ity programa ity, ao anatin'izany ny mari-pahaizana bakalorea.
Taratasy fanamarinana fitantanana data
Ny Certificate of Management Database dia mifangaro lohahevitra momba ny rafitra fampahalalana marobe toa Fironana fitantanana IT sy fitantanana stratejika miaraka amina lohahevitra fitantanana tahiry tahiry toa Data Warehouse sy rafitra fanohanana fanapahan-kevitra ary fiarovana sy fanaraha-maso ny angona data. Ity programa ity dia hahafahanao mandroso ao anatin'ny sahaninao ankehitriny na hanomana anao tsara kokoa amin'ny fiovan'ny asa ary mety ho vita amin'ny semesera roa. Misy fepetra takiana mialoha ho an'ity programa ity, ao anatin'izany ny mari-pahaizana bakalorea.
Diversity, Equity ary fampidirana leadership leadership
Diversity, Equity ary fampidirana mpitarika
Ny mari-pahaizana nahazo diplaoma an'ny Diversity, Equity ary ny fampidirana ho an'ny mpitarika dia natao ho an'ireo izay maniry hianatra ny fomba hanovana ny tontolon'ny asa amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fahasamihafana sy ny fampiroboroboana ny firaisana. Ity programa ity dia natao ho an'ny mpiasa mpitantana sy ny mpanatanteraka ary mety horaisina samirery na mifanaraka amin'ny mari-pahaizana master. Misy fepetra takiana mialoha ho an'ity programa ity, ao anatin'izany ny mari-pahaizana bakalorea.